Nibbana | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
The Nature of Nibbana Nibbana isastrange kind of noble and delicate elements which cannot be observed by materials or instruments and even not by Mind. It can be observed by Intuition. Human beings cannot observe Nibbana, not because … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Nibbana, Science	| Leaveacomment
Posted on March 12, 2012 by chitnge
Visualization Nibbana I know some people take interest in visualizing Nibbana. The strange thing is that Nibbana accepts neither Mind nor Body. It is apart from them, for those are changing in nature. Nibbana exists externally. It does not change. … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Magga Nyanna, Nibbana	| Leaveacomment
Posted on March 11, 2012 by chitnge
Nibbana It is there and here, now and then because it is Space-less and Timeless. Scientists nearly conquered Space but not Time. Nobody know about Nibbana practically but only me. I will explain it reasonably. May interpretations will be new … Continue reading →
Posted on March 10, 2012 by chitnge
Science and Knowledge We human beings are all the time searching for knowledge through the long history of mankind, in order to known about ourselves or about the universe or about the role of human beings in the universe. We … Continue reading →
Posted in Buddhism, Buddhism & Science	| Tagged Nibbana, Science	| Leaveacomment
Buddhism asaScience I take interest in Religion. It is because I want to know whether our Buddhism isakind of Religion or not. At last I realized that Buddhism is notakind of Religion. Not only … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Buddhism and Science, Nibbana, Science	| Leaveacomment
shwe-sar-myat-hnar & NIBBANA
ဒေါက်တာချစ်ငယ်၏ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သော – နိဗ္ဗာန် စာအုပ်မှ ဆောင်းပါးများကိုလည်း ဆက်တိုက် ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း စာဖတ်သူများကို သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် Admin (www.chitnge.com) Tags: Nibbana
Posted in Buddhism	| Tagged Nibbana	| Leaveacomment
Posted on April 2, 2011 by chitnge
မင်္ဂလာရှိသောစကားများ(၄) သစ္စာဝါဒီများ – သစ္စာဝါဒီများ သာဓုခေါ်လျှက်ရှိပါတယ် .. .. သာသနာအရိပ်မှာခို၊ မြတ်စွာဘုရား အရိပ်မှာခို၊ သစ္စာတရားရဲ့ အရိပ်မှာခိုပြီးတော့ – မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားကို ကျင့်သုံးဆောက်တည် နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင် ရှုသတ် ပွားများနေတာ၊ နေ့တဓူ တာဝန်ကျေပါတယ်။ သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ – မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အရိပ်ကို ခိုပြီးတော့ သာသနာကို ပုခုံးပေါ်မှာတင်ပြီး ပူဇော် လှုပ်ရှားနေတာပါပဲ – မိမိဘ၀က ဒါပါပဲ . . . လူတွေကတော့ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, သာသနာ	| Leaveacomment
Posted on April 1, 2011 by chitnge
မင်္ဂလာရှိသောစကားများ(၃) သစ္စာဝါဒီများ – အခါကြီးရက်ကြီးပေါ့နော် .. .. တရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကဲ “Deal” တစ်ခု လုပ်မလား? သစ္စာဝါဒီများကလည်း တရားကျင့်ရမယ် – မိမိကလည်း တရား ကျင့်ပုံကျင့်နည်း ပြောပြပေးမယ် – တစ်ချို့ကလည်း အရိယာ ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. .. ယုံရင်ဖြစ်တာပဲ။ ဒီလိုပြောတော့ လွယ်လိုက်တာလို့ အောက်မေ့ရင် Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, စိတ္တာနုပဿနာ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, စိတ္တာနုပဿနာ, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
မင်္ဂလာရှိသောစကားများ (၂) သစ္စာဝါဒီများ – မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ် ကျင့်ကြံအားထုတ် အောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့တယ်လို့ ပြောဖူးသားပဲ။ တကယ်ကျင့်တဲ့ အခါကျ တကယ်အောင်မြင်သွားတာ၊ ဒီအခါမှာ တကယ်မကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အံသြရတာပေါ့၊ ဥပမာ — လောကုတ္တရာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ရပြီး အရိယာ ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် အရိယာဉာဏ်ဟာ ရုပ်နာမ်မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်နာမ်ကနေ သီးခြားလွတ်သွားတယ်၊ ဒါကို မကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ဘယ်လိုမှ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျင့်တော့မှ နားလည်နိုင်မှာပါ။ Tags: Buddhism, Myanmar … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
Posted on March 30, 2011 by chitnge
မင်္ဂလာရှိသောစကားများ (၁) သစ္စာဝါဒီများ .. .. မင်္ဂလာရှိတဲ့ အခါကြီး ရက်ကြီးမှာ မင်္ဂလာရှိတဲ့ စကားတွေ ပြောချင်တယ်။ ရုပ်ရဲ့ အလွန်မှာ စိတ်ရှိတယ်၊ နာမ်ရှိတယ်ပေါ့၊ နာမ်ရဲ့ အလွန်မှာ ဉာဏ်ရှိတယ်။ ဉာဏ်ကျတော့ လောကုတ္တရာပေါ့နော် .. .. ဒီတော့ လောကရဲ့ အလွန်မှာလည်း လောကုတ္တရာရှိတယ်၊ (၃၁) ဘုံရဲ့ အလွန်မှာ နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်၊ သင်္ခတရဲ့ ဟိုမှာဘက်မှာ အသင်္ခတရှိတယ်။ အသင်္ခတဆိုတော့ အနုတ္တရပေါ့နော် .. .. ဒါတွေက ရှိတာပဲ .. … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged (၃၁)ဘုံ, Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, ပါရမီ, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး, အတ္တ, အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
Posted on March 23, 2011 by chitnge
ကာလသုံးပါးမှလွတ်မြောက်ခြင်း သစ္စာဝါဒီများ .. .. သစ္စာဝါဒီများကို သတင်းတစ်ခုပေးမယ် – မိမိအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း(၄၀) ကျော် ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ သိတာတွေ ရှိတယ်လို့ ၀န်ခံဖူးတယ်လေ- အဲဒါ တစ်ခု ပြောဦးမယ်။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုတာ အဲဒါ ဖိုလ်ဉာဏ်ခေါ်တယ်၊ အဲဒီ ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ မျက်မှောက်ပြုရင် ဖိုလ်ဉာဏ်ဟာ ရုပ်နာမ်ကနေ လွတ်တယ်။ ဖိုလ်ဉာဏ်ဟာ ရုပ်နာမ်က လွတ်တဲ့အတွက် ဖိုလ်ဉာဏ်ဟာ ကာလ သုံးပါးမှလွတ်တယ်။ (သစ္စာဝါဒီများ ဓမ္မစကြာမှာ တွေ့ချင်တွေ့ဖူးမှာပါ) ဖိုလ်ဉာဏ်ဟာ ကာလသုံးပါးမှ လွတ်တယ်၊ … Continue reading →
Posted on March 20, 2011 by chitnge
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏နက်ရှိုင်းမှု ယောဂီများ – မြန်မာပြည်ဟာ သိပ်ထူးခြားတယ်။ ဒီလိုပြောလို့လည်း ဘယ်လိုမှ မအောင်းမေ့ပါနဲ့ — အမှန်အကန် ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေ ပေါ်ထွန်းတော် မူခဲ့လို့ ထူးခြားတယ်လို့ ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သတင်း အမှန်ပါပဲ။ မိမိကိုယ်တိုင်ကတော့ က်ိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖူးတွေ့ရတယ် နာကြားရတယ် တပည့်ခံရတယ် အဆိုအဆုံးအမခံရတယ်။ အခု မိမိမှာဆိုရင် ဒီ ရဟန္တာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ အဆိုအဆုံးအမတွေဟာ များပြားပြည့်စုံ ကြွယ်ဝနေတော့ မိမိ အနေနဲ့ တရားသဘောကို တော်တော် ဗဟုသုတပြည့်စုံသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပဋိပတ္တိရှုထောင့်ကဆိုရင် … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, နိဗ္ဗာန်, အရိယာ, လောကီ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment